10 Mahafatifaty fiarovana any Frantsa By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Mahafatifaty fiarovana any Frantsa By Train
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 25/01/2021)
Ve ianao toy ny mandeha lamasinina? Ve ianao toy ny mahita mahagaga lapa ao amin'ny firenena tahaka an'i Frantsa? Raha izany no tranga, dia efa tonga ny toerana. Izany satria amin'ity lahatsoratra ity “10 Mahafatifaty fiarovana any Frantsa By Train” no hanome anareo ho raikitra lisitra ny folo mahafatifaty indrindra lapa any Frantsa. Inona koa, Ho hilaza aminao izahay ny fomba hanatratra azy ireo amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby!
1. Chateau ny Chenonceau
Chateau ny Chenonceau tsy manam-paharoa iray raha nanao izany ny fototry ny vato fikosoham-bary eo amin'ny 16faha taonjato. Azonao atao mora foana tonga izany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby tahaka ny lapa dia tena akaiky ny peo. Afaka mahazo izany avy amin'ny Tours, ny tanàna lehibe ara-drariny akaiky ho any anati-.
Nantes ho Tours Lamasinina
Lille ny Tours Lamasinina
Any amin'ny Chantilly Estate, lapa io dia mendrika tokoa ny fitsidihana indray mandeha hitanao ny fomba mijery. Tena akaiky ny ivon'ny Paris izay mahatonga mandeha ho azy ho tsio-drivotra.
Eny, izany ara-teknika lapan'andriana, fa iza no miraharaha, izany mahatalanjona! izy ireo nanorina Fontainebleau indray ao amin'ny 12faha taonjato, ary mbola mijery mahavariana sy tsara foana. Izany ihany koa mora ny hitsidika. Afaka hahatratra izany avy Paris Tsy ampy adiny iray miaraka amin'ny tsipika Transilien R.
Afaka mahita tsara tarehy io lapa ao anatin'ny pirenena voajanahary valan-javaboary that’s right outside of Paris. Na izany aza, mitsidika io lapa tsara tarehy lamasinina dia somary sarotra toy ny tsy misy afa-tsy ny mivezivezy izay mandeha mivantana izany. Raha kely indrindra dia mbola afaka mankafy ny mitaingina fiaran-dalamby ho any Paris!
Chambord Castle dia tena mesmerizing sy Mampitolagaga ny lapa izay mendrika ny fitsidihana. Mba hahazoana izany, ianao no mila taxi na mivezivezy avy any amin'ny tanànan'i Blois. Na izany aza, tonga Blois dia tsy ho azo avy amin'ny tanàna maro any Frantsa. Afaka mahazo azy io tao anatin'ny adiny iray sy sasany, rehefa mandeha avy any Paris.
Anati-rova Paoly ny Amboise no eo amin'ny lapa mahafatifaty indrindra any Frantsa. Tena tena firavaka ny maritrano avy amin'ny Renaissance. Afaka tonga mora foana ny Chateau lamasinina avy amin'ny tanàna maro any Frantsa amin'ny alalan'ny iray TGV na Intercity fiarandalamby.
Fahazoan-dalana mankany isika izao tena mahafatifaty, lapa kely toy ny malaza Alexandre Dumas nanao izany! Afaka tonga ny Monte Cristo Castle mora foana ao an-toerana amin'ny tsipika fiarandalamby araka ny marina ao Paris! Dia ao an-tsaina, dia afaka maka na lamasinina ianao, raha avy amin'ny toerana hafa.
Izy io dia tena tsara tarehy lapa kely naorina tsara amin'ny nosy iray ao anatin'ny farihy kely! Tsy afaka mahazo na prettier noho izao. Afaka mahazo ho any anati-mora amin'ny alalan'ny fanaovana antsasaky ny ora ny mitaingina fiaran-dalamby avy any an-tanànan'i Tours. Avy eo ianao dia mila manao afa-tsy ny 20 minitra tongotra ho any anati-.
Mety tsy ho any amin'ny lapa mahafatifaty indrindra any Frantsa, fa tsy maintsy ahitana azy io. Anati-rova Paoly dia manan-karena amin'ny tantara, Ary ny tena mahatalanjona, tsy amin'ny fomba mahafatifaty! Ny akaiky indrindra fiantsonan'ny fiaran-dalamby ho any anati-dia ao Selestat, ary afaka hahatratra azy amin'ny Strasbourg na maro tanàna hafa teo akaiky teo.
The Château de Pierrefonds Tsy isalasalana fa ny mendrika indrindra ho amin'ny lisitra momba ny tena mahafatifaty lapa any Frantsa. Afaka ny lapa ihany no tonga amin'ny alalan'ny fanaovana ny lamasinina ho Compiègne, Dia naka ny fiara fitateram-bahoaka ny Pierrefonds.
Raha toa ka mila bebe kokoa eo amin'ny fiaran-dalamby Info Tsidika 10 Mahafatifaty fiarovana any Frantsa By Train, ianao dia afaka hifandray antsika mandritra ny toerana.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
trano fiarovana europetravel Travel travelfrance